RW Rooble oo weli wajahaya eedo culus | KEYDMEDIA ONLINE
Hanaanka doorashadda Baarlamaanka ayaa u muuqda mid aan lagu wada qanacsanyn, oo ay soo baxayaan tabashooyin ay qabaan saamileyda qaar.
Qoraal uu soo saarey Maanta, oo nuqul kamid ah Keydmedia Online lasoo gaarsiiyay ayuu ku sheegay Cabdi Xaashi in Rooble uu iska indha-tiray baaqyo uu u jeediyay iyo xiriiro toos ah uu uu la sameeyay, oo kaga dalbaday inuu xaliyo khilaafka ka taagan gudiga doorashadda Xildhibaanada gobollada Waqooyi.
Gudoomiyaha Senate-ka ayaa sheegay inay ku jiraan gudiga saddex xubnood oo Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha magacaabey, kuwaasoo uu tilmaamay inaysan ahayn dhex-dhexaad, oo ay kamid yihiin shaqaalaha dowladda iyo NISA.
Gudiga Somaliland wuxuu ka kooban yahay 11 xubnood, kuwaasii min 4 ay soo kala xuleen Cabdi Xaashi iyo Mhadi Guuleed halka saddexda kale uu Rooble soo magacaabey, waxayna ku kala jabeen doorashadda gudoonka oo dhinacba gudoomiye cusub doortay dhawaan.
Kala-qeybsanaanta waxaa keenay in Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi ku loolamayaan kuraasta loo qoondeeyay gobollada Waqooyi, oo midba walba doonayo inuu soo saaro kuwa isaga uu wato, waana qeyb kamid ah cabaqadaha doorashadda marka laga yimaada arinta Gedo.
Hoos ka akhriso qoraalka Cabdi Xaashi: